Into eyodwa ongase ungayiqapheli ukuthi ubhiya omuhle Umzila ngu zemininingwane kungatholakala eziningi zezitimela. I Sheffield Tap ingenye engcono, obonisa mayelana 30 emiphongolweni kanye okusalungiswa - ezinye zazo ukugqamisa okukhethwayo kusukela ubhiya zendawo kuqhathaniswa usithe. Ungase uthole esitimeleni uhambe vakashela ezinye zazo ... noma uyahlala unganyakazi bese uchitha isikhathi esiningi izibonelo zalokho kubo. Yeka cool?!
Igama bar livela ubhiya delirium Tremens, uphawu lwayo lendlovu olubomvana nalo luhlobisa ukungena kwekhefi.
Isiteshi sesitimela yi- 10 iminithi kusukela cafe, ngakho akumangalisi-ke ivuliwe Beer Umzila ngu zemininingwane – Beers Kuhle eYurophu.
Ukusungulwa okwamanje okungewakho Sam Smith Old Brewery. ezinkantini zabo ziyisiliva go-to kwe izakhiwo amahle, izindabuko zendabuko, nezindawo zangaphakathi ezithokomele. Azikho brand enkulu, Iminikelo nje brilliant kusukela lapho kudayiswa khona utshwala ezabo Tadcaster, Yorkshire.
Nakuba sokuphisa uye olwesimanje kusukela 1993, esingamakhilomitha yokuguga zewayini ezisele komhlaba bayingxenye ukuvakasha. Umchilo ongaphansi komhlaba uphelela ekuvutsheni kokhuni okuvulekile nemiphongolo emikhulu yokhuni esetshenziselwe ukuguga yonke uPilsner Urquell.
Singavumela ngawe ku imfihlo? I ubhiya umhlabeleli eJalimane hhayi e Munich. Germany nezinhlobonhlobo zezilwane besizulu ezehlukile. Ngisho eziningi zezwe brews kwansuku zinhle ngokumangalisayo. Kodwa akuzona zonke ubhiya kungaba esihle, ngisho nasemhlabeni lapho ubhiya kuyinganekwane. Uma ufuna ezihlukahlukene futhi uthanda ubhiya yakho nge uhlamvu sizzle, zisize umusa ukuhlela uhambo ezweni lasekhaya laseBavaria, lapho ubhiya liyingxenye isiko lendawo futhi ukwenziwa ngabantu abangokoqobo nge izindaba ukutshela.
Izindawo zokuphisa utshwala ezincane ezingamashumi ayisikhombisa nanye isebenze kule ngxenye Bavaria. Ezinye zazo esukela emuva le 1400s. Eleven kubo babe yizinkulungwane noma eyasungulwa isonto, run by zezindela, noma okungewakho izikhulu. Three Namanje eziqhutshwa kwezicebi German futhi umuntu omdala yesonto lapho kudayiswa khona utshwala emhlabeni. Lower EBavaria kuyinto efihliwe uma kuziwa ubhiya.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)